पौडिएरै प्रशान्त महासागर पार ! – आफ्नो प्रेरक संसार
पौडिएरै प्रशान्त महासागर पार !
Bibas chetan — २६ जेष्ठ २०७५, शनिबार ०४:४६0comment
यस यात्राभरका लागि उनको दैनिकी समान हुने बताइएको छ। उनले दैनिक ८ घन्टा पौडिने र बाँकी समय सहयोगका लागि सँगै रहने डुंगामा खाना खाने र आराम गर्नेछन्। त्यसपछि पुनः अर्को दिनको यात्रा थाल्नेछन्। यात्राका क्रममा शरिरमा शक्तिको तहलाई उच्च राख्न दिनमा करिब ८ हजार क्यालोरी बराबरको खानाको व्यवस्था गरिने छ